Tsika dzeDutch: njodzi nemhedzisiro yekuunza ...
Blog » Tsika dzeDutch: njodzi nemhedzisiro yekuunza zvigadzirwa zvakarambidzwa muNetherlands
Tsika dzeDutch: njodzi nemhedzisiro yekuunza zvigadzirwa zvakarambidzwa muNetherlands
Pakushanyira imwe nyika nendege, zvinozivikanwa ruzivo kuti munhu anofanirwa kupfuudza tsika kunhandare yendege. Vanhu vanoshanyira Netherlands vanofanirwa kupfuudza tsika semuenzaniso Schiphol Airport kana Eindhoven Airport. Zvinowanzoitika kuti mabhegi evatakuri ane zvigadzirwa zvakarambidzwa, izvo zvinobva zvapinda muNetherlands nechinangwa kana semhedzisiro yekusaziva kana kusaziva. Pasinei nechikonzero, mhedzisiro yezviito izvi inogona kunge yakanyanya. MuNetherlands, Hurumende yakapa tsika iyo mvumo yakasarudzika yekupa zvirango zvehutsotsi kana dzekutonga. Aya masimba akaiswa pasi muAlgemene Douanewet (General Forodha Act). Kunyanya ndechipi masanctions aripo uye akanyanya sei masanctions anogona kuwana? Verengai apa!
The 'Algemene Douanetwet'
Mutemo weDutch wechisimba muuzhinji unoziva musimboti wenzvimbo. Dutch Criminal Code ine chirevo chinotaura kuti iyo Code inoshanda kune wese munhu anoita chero mhosva yekukanganisa mukati meNetherlands. Izvi zvinoreva kuti nyika kana nyika inogarwa nemunhu anenge atadza haisi nzira dzinosarudzika. Iyo Algemene Douanewet yakavakirwa pachirongwa chakafanana uye inoshanda kune yakatarwa tsika-mamiriro anoitika mukati meiyo nzvimbo yeNetherlands. Iko Algemene Douanewet isingapi mimwe mitemo, munhu anogona kuvimba nezvakawanda zvinopihwa pakati pevamwe Dutch Criminal Code ('Wetboek van Strafrecht') uye General Administrative Law Act ('Algemene Wet Bestuursrecht' kana 'Awb'). MuAlgemene Douanewet pane kusimbiswa kwezvirango zvematsotsi. Zvakare, pane mutsauko mune mamiriro ezvinhu umo mhando dzakasiyana dzezvirango dzinogona kuiswa.
Chirango chekutonga chinogona kuiswa: kana zvinhu zvikasaendeswa kune tsika, apo imwe isingatevedzere marezheni, kana pakashaikwa kwezvinhu panzvimbo inochengeterwa, kana zviitwa zvekuzadza tsika dzezvinhu zvakaunzwa muEU zvisiri. akasangana uye kana zvinhu zvacho zvisati zvawana nguva yekuenda. Iyo Administrative faindi inogona kusvika pakakwirira kwe + - EUR 300, -, kana mune dzimwe nguva urefu hwepazhinji zana muzana rehuwandu hwemabasa.
Zvinonyanya kuitika kuti mutongo wetsotsi uchaiswa kana zvinhu zvisingabvumirwe kupinda muNetherlands nekusvika kune airport. Mutongo wekupara mhosva unogona semuenzaniso kuiswa kana zvinhu zvapinda kunze kwenyika kuNetherlands izvo maererano nemutemo zvinogona kunge zvisingaendeswe kunze kana zvakataurwa zvisiri izvo. Kunze kweiyi mienzaniso yematsotsi, Algemene Douanewet inorondedzera huwandu hwehumwe mhosva. Iyo mhosva yematsotsi inogona kazhinji kusvika pakukwirira kweEUR 8,200 kana kukwirira kwehuwandu hwemabasa ayo anocherwa, kana huwandu uhwu hukakwira. Mune zviitiko zvezviito zvekuda, iyo yakakwana faindi iri pasi peAlgemene Douanewet inogona kusvika pakukwirira kweEUR 82,000 kana kukwirira kwehuwandu hwemabasa ayo anochekwa, kana huwandu uhwu hwakakwira. Mune zvimwe zviitiko, iyo Algemene Douanewet inomisa jeri. Muchiitiko ichocho, zviito kana kusiyiwa kunogona kuonekwa semhosva. Kana iyo Algemene Douanewet isingagadze mutongo wejeri asi chete mubhadharo, zviito kana kusiyiwa zvinogona kuoneka semhosva. Mutongo wakakwira wejeri unosanganisirwa muAlgemene Douanewet mutongo wemakore matanhatu. Kana zvinhu zvinorambidzwa zvikaendeswa kuNetherlands, chirango chinogona kunge chiri mutongo wemakore mana. Iyo faindi mune yakadaro kesi ine yakakwana yeEUR 20,500.
Maitiro ekutonga: maitiro ekutonga anosiyana nematsotsi. Zvichienderana nekuomarara kwechinhu, maitiro ekutonga anogona kuve akapusa kana kutowedzera. Kana zviitiko zviitirwe faindi isingasviki EUR 340, - - inogona kuiswa, maitiro acho anowanzova akapusa. Kana mhosva ikacherechedzwa inogona kupihwa mutero wekutonga, izvi zvinobva zvaziviswa kune munhu ari kuita basa. Icho chiziviso chine izvo zvinowanikwa. Kana zviitiko zviitirwe iyo faindi yacho inogona kunge yakakwira kupfuura EUR 340, - iyo nzira yakadzama inoda kuteverwa. Kutanga, munhu anenge arimo anofanira kugamuchira chiziviso chakanyorwa chechinangwa chekumanikidza kuti mutero ubhadharwe. Izvi zvinomupa mukana wekuramba mubairo. Pashure zvichazotongwa (mukati memavhiki gumi nemaviri) kuti mubairo uchaiswa kana kwete. MuNetherlands munhu anogona kuramba chisarudzo nedare rekutonga (muongorori) mukati memavhiki matanhatu mushure merongero. Sarudzo iyi ichaongororwazve mukati mevhiki nhanhatu. Pashure pacho, zvinokwanisika kuendesa sarudzo kudare.
Maitiro ematsotsi: Kana mhosva yemhosva ikawanikwa, mushumo wepamutemo uchaitwa, pachinzvimbo icho chinogona kupihwa mutongo wechirango. Kana kodhi yekuranga ikapihwa nehuwandu hwepamusoro kupfuura EUR zviuru zviviri, munhu anofungidzira anofanira kutanga anzwiwa. Ikopi yemutemo wekubhadhara unopihwa kune anofungidzira. Muhloli kana mukuru akasarudzika anozotarisa nguva inofanirwa kubhadharwa faindi. Mushure memazuva gumi nemana mushure mekugamuchira kopi yechirango chekubhadhariswa nemusungwa, mubairo uyu unokwanisa kuwanikwa. Kana mubaiwa akasabvumirana nechisungo chechirango, anogona kuramba danho rechirango mudhipatimendi reDutch rekupomera vanhu mukati memavhiki maviri. Izvi zvichaguma nekuongororwazve kwenyaya, mushure mezvo mutongo wechirango uchamiswa, uchinjwe kana mumwe angadaidzwa kudare. Dare rinobva ratonga zvinoitika. Mune zvimwe zviitiko zvakanyanyisa, mushumo wepamutemo sezvakataurwa mumutsara wekutanga wendima yapfuura unofanirwa kutanga watumirwa kumuchuchisi wehurumende, uyo anogona kutora nyaya yacho. Muchuchisi wevanhu anogona zvakare kusarudza kuendesa nyaya yacho kumuongorori. Kana iyo yekurairwa isati yabhadharwa, mutongo wejere unogona kutevera.
Nongedzo dzechirango dzinosanganisirwa muAlgemene Douanewet. Iyo yakanyanya kureba yezvirango zvinotarwa kungava kunoongorora kana munhu akasarudzwa kana muchuchisi wevanhu (iyo yekupedzisira chete kana paine chiitiko chemhosva), uye achaiswa pasi nechirango (strafbeschikking) kana danho rekutonga (beschikking . Sezvatsanangurwa pakutanga, munhu anogona kukwidza kupokana nesarudzo yezvekutonga ('bezwaar maken') pabazi rekutonga kana munhu anogona kuramba mutongo wechirango kuna muchuchisi wevanhu. Mushure mekupokana kwekupedzisira uku, dare richapa mutongo pamusoro penyaya iyi.
Izvi zvirango zvinomisikidzwa sei?
Iyo yekurairwa kwechirango kana danho rekutonga kazhinji rinotevedzera kwechinguva chiitiko chiitiko ichi, sezvo zvichitora rimwe rekuita / rekubata basa kuisa ruzivo rwese rwakakodzera pabepa. Zvisineyi, chiitiko chinozivikanwa pasi pemutemo weDutch (kunyanya mutemo weDutch) kuti aigona, mumamiriro ezvinhu, ave kukwanisa kubhadhara mafairo echirango nekukasira. Muenzaniso wakanaka kubhadhara kwakananga kwemadhairo echirango kana uine zvinodhaka pamitambo yeDutch. Izvi, zvisinei, hazvina kumbokurudzirwa, sezvo kubhadhara faindi kuchangoita kubvuma kwemhosva, uine mhedzisiro yakawanda senge rekodhi yemhosva. Kunyange zvakadaro, zvinokurudzirwa kubhadhara kana kuramba iyo faindi mukati menguva yakapihwa. Kana mushure mezviyeuchidzo zvakati wandei chirango chisati chabhadharwa, mumwe anowanzo fona achibatsirwa nebiliff kuti adzore huwandu. Kana izvi zvikasashanda, mutongo wemujeri unogona kutevera.
Kana iwe uine chero imwe mibvunzo kana hurukuro mushure mekuverenga ichi chinyorwa, inzwa wakasununguka kubata mr. Maxim Hodak, Gweta-pa-mutemo pa Law & More Via [email inodzivirirwa] kana mr. Tom Meevis, Gweta-pamutemo pa Law & More Via [email inodzivirirwa] kana kutifonera pa +31 (0) 40-3690680.
Previous Post Mari yekushandiswa kwefoni yako kunze kwenyika iri kuderera nekukurumidza
Next Post Mazuva ano, iyo hashtag haina kungofarirwa paTwitter ne Instagram ...